June 14, 2019 Xafiiska Puntland Maqal Iyo Muuqaal, Puntland, Somalia, Wararka Maanta 8
Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Maxamed ayaa jimcihii maanta dib ugu laabtay Garoowe kadib markii uu fashilmay shirkii madaxda dowlad goboleedyada oo uu kaga qeyb-geli lahaa magaalada Nairobi.
Deni ayaa helay soo dhaweyn balaadhan oo ay usameeyeen masuuliyiin uu horkacayo madaxwayne kuxigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash iyo qaybo kamid ah shacabka Caasimadda.
Siciid Deni waa tuug daneyste ah ee Puntland ka taajiraya oo nacabka shisheeye na ka xaraashaya. Waa kan hantiyadii qaran ee dagalka Itoobiya u gacan galiyay oo shacabkeeda na geyiga ku fasaxaya sida aan bog hore ba ku soo sharxay. Puntland iyo Soomaaliya ba shar buu u yahay.
Safaradiisu waa kuwo Puntland iyo Soomaaliya oo dhan lagu shirqoolayo oo wax macne ah kuma fadhiyaan. Marka aan lillaahi u hadlo waxaa oddoros qoto dheer ah iiga hiillaacay xaqiiqada ah in ay Hawiyuhu iyo Dirtu yihiin Soomaalida kali ah ee Soomaaliya cadawgeeda ka badbaadin kara oo naftooda qummaati ugu huraya.
Suulilanderad dhiladii Iidoor ee guska usoo doonan jiray marqaannews baa taajka Maakhir iska dhigaysa. Hawiye waa xoolo marka xayawaanka la tirinayo tirada lagu darsado. Iidoor na 29 sano bay citiraaf inay helaan u kambayn gareynayeen Gay & Lesbian u noqseen oo diinta uga baxeen oo soomaalinimada uga baxeen iyadiina lama hayo sidii Orgi madaxa kirli la galay bay iska daba ka wareegayaan. Waana lasoo afjarayaa mar dhaw
dhilo Maakhir.. cay badanaaaa.
Salaamullaah Caleykum idinka na habo. Qoraalkaygii Englishka ahaa iyo kaagii baa isku beegmay oo kaaga ma aanan arkin markii aan kaygaa qorayay. Ina adeer sida aan qoraalladayda ugu nuuxsaday ba reer Sool, Sanaag iyo Cayn ( oo ah Harti Siciid iyo Maxamuud ka badan) qaladkii weynaa ee ay galeen baa ahaa in ay mar na Iidoorka heshiisyo la kala saxiixday isku halleeyeen oo mar kale na ay Majeerteenka heshiis la kala galay isku halleeyeen. Isku halleyntoodii daacadnimada toleed ku salaysnayd ayay sida dhacday ba si xun hadda u eedeen oo dib loo saxayaa Eebbe idamkiisa.
Gabar Hartiyeey, tolnimadu waa halkeeda oo iyadu ma masaxmayso laakiin marka uu shimbirkeedu suuxo oo lagu safaado in siyaabaha kale loo kala maarmo ayay dantu khasbaysaa. Iidoor damacoodu odayadeena kama daahsoonayn laakiin waxii siyaasad ahaan ay maslaxadi inoogu wada jirto fursad bay siiyeen maadaama geyi lagu wada dhaqan yahay oo ay duruufuhu iyo danuhu isku wada maran yihiin. Damacii baa se ka qaalib noqday oo aynu iidoorka ku kala baxnay. Waxaa nooga sii daran damaca aynu Majeerteenka kala kulannay iyaga na.
Marka aan Majeerteen leeyahay waxaan u qasdiyayaa madaxda laakiin bulshaweynta iyo hoggaan dhaqameedka xataa gacan buuxda ayay ka geysteen waayo dayaca iyo darxumada Hartiga kale Majeerteen u doodaya oo saxaafadda iyo idaacadaha kor iyo hoos oogu dhawaaqaya lama hayo, adiga mooyaanee. Maamul inoo gaar ah xal inoo dhaamaa ma jiro runtii oo waxaa ba laga ma maarmaaan ka sii yeelaya in ay madaxda Iidoor iyo kuwa Majeerteen geyiyadan Itoobiya ka xaraashayaan oo aynu mustacmar noqonayno.
Daraawiishta Dhulbahante iyo Warsangali masiibadaasu ma aha mid ay aqbali karaan. Gabar Harti, waxaa Islaamnimo dhab ah oo ilbaxnimada waafaqsan in mar walba runta iyo xaqa laga xigo oo aynaan madaxda iyo reeraheena hayb ugu xaglinin. Caddaaladda ayaa haddii kale lumaysa walaal.
Jawaabtaa kore waa aniga oo way iga soo fakatay.
Waxaan intaas raacinayaa in ay Majeerteenka sida xun uga qaafilsan yihiin fashilka madxdooda ee marka aynu kuweena tolka Sanaag nalka ku ifino anaga afka iyo sanka nagu goostaan. Waa tan ee i la dheehda damiir xumada meeshan taalla.
Marka tolka Sanaag laga hadlayo sida qaalibka ah Warsangaliga uun baa lagu soo koobaa oo waxaa xisaabta laga saaraa beelaha kale ee tolnimadan ka tirsan, sida (Hinjiiye, Dashiishe, Tiinle, Liibaan, Gahayle, Naalleeye Axmedka Dhulbahante iyo Jibraahiilka Ogaadeen. Tolka intaas la’egi miyaanu Majeerteenka xisaab ba uugu jirin?
Dagaalkii ay iidoorku 1991kii Sanaag ku soo qaadeen reerka ay qummaati u la beegsadeen ay deegaankooda ka qixiyeen waxay ahaayeen Gahaylaha Siwaaqroon ee Majeerteen ka dhashay oo al’aana deegaankoodu wax badani ka maqan yahay. Marka Warsangaliga xaqa iyo runta ka hadla sidayda lagu soo qamaamayo, maxay Majeerteenku uga dhiidhiyi waayeen oo ay calal aqal reerkaas deegaankooda ugu soo dhicin waayeen?
Miyaay labo Majeerteen ahi abidkood iska wareysataa dhulkaas ilma adeeradooda Gahayle laga haysto? Waa maya! Sow damiir xumada aynu anagu ka gubanayno ma aha taasu? Anagu tolkan iyo dhulkiisaas baaxaddaas dhan baa inoo muuqda oo xisaab buuxda inoogu jira. Haddii tolnimadii Puntland lagu wada dhistay Majeerteen lagu koobay dee eed kuma lihin lihiin in aynu ka tashanno.
Laakiin ceebta ugu weyn ee Majeerteenka cambaarta sideeda ugu taalla waxay tahay in ay leeyihiin damiirkii iyo dadnimadii ay beesha Gahayle deegaankooda ugu soo dhicin lahayeen.
WCSWRB wallkeey Taajka Maakhir Allah yasallimuk
Cismaanoow I sensed the disable ness of Puntland not doing anything to defend SSC long time ago before anyone else whereas lots of our people woke up now. As you stated above “the error of judgement” I would say during 9os was good decision made amongst Harti clans and good agreement reached to built Puntland state, but capturing Sool region and part of Sanaag during 2007 was the time Majeerteen started back off because of our Dhulos cousins was accused attacking Puntland soldiers at the back as fighting sight by sight with SNM militias who use tactics such as bribery to give those who have little understanding in order to divide and rule and continued their thick head to get Dhulbahante and Warsangeli clans under their feet and carry on dividing until now. Afterwards those tactics worked for SNM which backed up foreigners as we all know the entire ideas come from westerners Ethiopia as they support them to pay everything such as trainings, give advices etc. There were rumours when ever Puntland want take action were disabled by telling them stay away from “disputed areas”, calling them for reconciliation and so on. Also Puntland have been opened 3 ways war to weaken them plus terror attacks in the inner cities in Puntland carried out by SNM and their co-workers Alshabaab.
Immediate action needed I agree with you as soon as possible however,
will you able to defend your region on your own? economically, millinery forces trainings and everything don’t forget federal government is disabled too.
ASC Taajka Maakhir markale wallkiis
Oo maxaa Gaheeyle kaliya ooga hadlee ina adeeroow ma Dhulbahante iyo Warsangeli buu nooga sokeeyaa kkkkkk waa hal habeen only soo maahan? kkkk
Aniga iyo in badan oo aan ogahay Cismaanoow waan ka hadalnaa dhibaatada oo weeyna danqeeysaa lkn hadee hooyooyin caruurleey ah ilaa intee wax qaban karaan? Insha Allah hada waxaan rajeeyneeynaa ISRAAC iyo MIDNIMO dabadeed mar marsiinyo weey dhamaan oo waa in laiska difaacaa hororka.
Qolyihiinaan Warsangeli qaylo iyo cataw baad haysaane cidaad xoolo ku leedahiin u raadsada.Intaas dad baad eedaynaysaan.Dadkaad eedaynaysaana waa asaagiin.Isaaq idinkaa ugu tagay gurigooda iyo Hargeeysa ee maxaad ayaga ku eedaynaysaan?Maxaad sidoo kale Majeerteen ku eedaynaysaan oo ay idin ka hagradeen.Waryaaya xishooda oo iskadaaya hadala daciifnimadaa.